Abathengisi Bangakuvimbela Kanjani Ukulahlekelwa Ekubonisweni Kokubonisa | Martech Zone
NgoLwesithathu, July 19, 2017 Amitaabh Malhotra
Hamba uphansi kwanoma yisiphi isitolo sodaka nodaka futhi amathuba okuba, uzobona othenga ngamehlo abo ekhiyiwe ocingweni lwabo. Kungenzeka baqhathanisa amanani ku-Amazon, bacele umngane isincomo, noma babheke imininingwane ngomkhiqizo othile, kepha akungabazeki ukuthi amadivayisi eselula abe yingxenye yesipiliyoni sokuthengisa ngokomzimba. Eqinisweni, abathengi abangaphezu kwamaphesenti angama-90 basebenzisa ama-smartphone ngenkathi bethenga.
Ukukhuphuka kwamadivayisi eselula kuholele ekuveleni kwe- ukubukisa, okuyilapho i-shopper ibheka umkhiqizo esitolo sangokwenyama kodwa iwuthenga online. Ngokwenhlolovo kaHarris, cishe isigamu sabathengi—46% - igumbi lokubukisa. Njengoba lo mkhuba wawudlondlobala, wasuka waqala inhlekelele nobumnyama izibikezelo zokuthi izokuqeda kanjani ukuthengisa ngokomzimba.
I-apocalypse yokubukisa kungenzeka ukuthi ayikenzeki okwamanje, kepha lokho akusho ukuthi abathengisi bomzimba abalahlekelwa yibhizinisi yilabo abancintisana nabo. Abathengi ngeke bayeke ukusebenzisa izingcingo zabo ukubasiza njengoba bethenga. Abathengi banamuhla bayazwela ngentengo futhi ngifuna ukwazi ukuthi bathola okuhle kakhulu. Esikhundleni sokuzama ukushaya indiva noma ukulwa namadivayisi eselula esitolo (okuwukuvivinya okungenamsebenzi), abathengisi kufanele balwele ukuqinisekisa ukuthi lapho umthengi esebenzisa umakhalekhukhwini esitolo, basebenzisa uhlelo lokusebenza lomthengisi, esikhundleni somunye umuntu .
Ukuhlanza - Ukufaniswa Kwentengo Esuselwe Kuhlelo Lokusebenza
Sijwayele i-Showrooming nokuphambene kwayo Ukwakhiwa kwewebhu - lapho umthengi ethola into online, kodwa ekugcineni ayithenge esitolo. Kokubili kuncike ekuthengelweni kokuthola into kumongo owodwa kepha kuthengwe kumongo ohluke ngokuphelele. Kepha kuthiwani uma abathengisi bephatha uhlelo lwabo lokusebenza njengokwandiswa kwegumbi labo lokubonisa futhi bakhuthaze abathengi ukuthi bahlanganyele nohlelo lokusebenza lapho basesitolo. Njengoba kushiwo ngenhla, isizathu esiyinhloko esenza umthengi azithobe ekuboniseni ukubona ukuthi bangakwazi yini ukuthola isivumelwano esingcono kumthengisi oncintisanayo noma bathole insizakalo engcono. Abathengisi bangagwema ukulahlekelwa yibhizinisi ngokuhlanganisa ukuqhathanisa intengo kanye / noma isici sokufanisa intengo kuhlelo lwabo lokusebenza, oluvimbela abathengi ekubukeni kwenye indawo ukuze bathenge - noma ngabe bathola muphi umkhiqizo.
Isibonelo, ukufaniswa kwentengo kuyinkinga enkulu kubathengisi be-elekthronikhi. Abantu baya esitolo, bathole i-TV abafuna ukuyithenga, bese behlola i-Amazon noma i-Costco ukubona ukuthi bangathola isivumelwano esingcono ngayo. Abangahle bakwazi ukuthi umthengisi futhi angaba namakhuphoni, ukunikezwa kanye nemivuzo yokwethembeka etholakalayo engabiza i-TV ngaphansi komncintiswano, iqiniso elahlekile lapho usebenzisa amathuluzi okuphequlula encintisana nabo. Ngaphandle kwanoma ikuphi ukunikezwa okuthile, umthengisi naye angaba nesiqinisekiso sokufana nentengo, kepha kudinga umhlobo ukuthi abone ubufakazi bokuthi umkhiqizo uyatholakala ngentengo ephansi evela emncintiswaneni, lapho-ke badinga ukugcwalisa amaphepha athile ukuze intengo entsha kungabonakala ngesikhathi sokuphuma ngaphambi kokuvumela ikhasimende ukuthi lithenge. Kunokungqubuzana okukhulu okuthintekayo, ngoba yini engalingana nentengo umthengisi anganikeza umthengi nganoma iyiphi indlela. Ngokusebenzisa uhlelo lokusebenza lomthengisi ukwenza ukushintshashintsha kwentengo, yonke inqubo ingenzeka ngemizuzwana - umthengi usebenzisa uhlelo lokusebenza lomthengisi ukuskena umkhiqizo futhi abone inani awanikeza lona ngemuva kokulihlanganisa nabancintisana nabo abaku-inthanethi, intengo entsha iyangezwa ngokuzenzekelayo kuphrofayili ye-shopper, bese wabelwa yona lapho eqeda ukuphuma.
Ukuxhumana kubalulekile lapha. Noma umthengisi enikeza isici sokuqhathanisa intengo, kuyashuba uma abathengi bengazi ngakho. AbakwaBrands kufanele batshale imali ukuqwashisa ngokusebenza kwezinhlelo zabo zokusebenza ngakho-ke lapho abathengi benesifiso sokuya egumbini lokubonisa, bona Igumbi lokusebenzela esikhundleni salokho, uhlale ngaphakathi kohlelo lomthengisi.
Lapho abathengi bengeniswe endaweni ehambayo, mhlawumbe ngokusebenzisa i-webrooming ephumelelayo, kunezindlela eziningi kakhulu abathengisi abangaxhumana nabo ngazo. Ungacela abathengi ukuthi baskene izinto futhi badlale izici zesipiliyoni sokuthenga esitolo. Intengo emangazayo, ukunikezwa kwentengo esheshayo, nokunikezwa okunamandla okususelwa kulolo shopper oluthile kugcina abathengi bejabule futhi behlanganyela.
Ngaphezu kwalokho, ukuzibandakanya kohlelo lokusebenza kunikeza abathengisi ukuqonda okukhulu ukuthi abathengi babo bangobani. Cabanga ukuthi umsebenzisi ungena esitolo, ahlole into ethile, bese ethola inani elikhethekile eliguquka ngesikhathi sosuku. Lapho abantu abaningi abasebenzisa uhlelo lokusebenza ukuskena izinto, abathengisi bemininingwane eminingi bathola kumakhasimende abo. Futhi amakhasimende akudingeki nokuthi athenge ukuze askene. Bangathola amaphuzu wokwethembeka, nawo adale uchungechunge lwezinkwa zezinto ezingaphakathi kwesitolo. Abathengisi bangasebenzisa leyo datha ukuqonda ukuthi yiziphi izinto ezishisayo nokuthi amakhasimende athengani empeleni. Uma kunento ethile enezinga lokuguqulwa eliphansi, umthengisi angaqalisa analytics ukuthola ukuthi kungani. Uma kunentengo engcono kumncintiswano, umthengisi angasebenzisa lolo lwazi ukunciphisa amanani abo, futhi ngaleyo ndlela ahlale encintisana.
Enye indlela abathengisi abangavimbela ngayo ukulahlekelwa kusuka ekubonisweni kungokuhlanganisa izinto. Izinto ezisesitolo zingahlanganiswa ngenqwaba nezinto ezingaphathwa esitolo, kepha lokho kuzohamba kahle ngaleyo nto. Uma othile athenge ingubo, inqwaba ingafaka izicathulo zokuxhumanisa ezitholakala kuphela endlini yokugcina impahla. Noma uma othile athenge izicathulo, inqwaba ingafaka amasokisi - ezinye izinhlobo zazo ezingenziwa ngezifiso ngokuphelele kulokho okuthandwa ngabathengi, bese zithunyelwa ekhaya. Izinhlelo zokusebenza ziyithuba elihle lokwakha iphakethe elifanele lamakhasimende, futhi ngokwenza njalo, hhayi ukukhuphula ukuthengisa kuphela, kepha kunciphisa nezindleko ngokunciphisa ama-SKU agcinwa esitolo kuqhathaniswa nendawo yokugcina impahla eyodwa.
Ngaphezu kwalokho, izinyanda zingandiswa zingafaka amabhizinisi endawo nozakwethu abanikela ngemikhiqizo ehlukile kanye nezinsizakalo ezihamba kahle nezimpahla zomthengisi uqobo. Cabanga ngomthengisi wezemidlalo. Uma ikhasimende lizama ukuthenga isethi yama-skis, isici sokugoqeka kuhlelo lokusebenza singasiza ekubaqondiseni kunqubo yesinqumo ngokuncoma ukuthi yiluphi uhlobo lwamathambeka ama-skis alulungele futhi liphakamise namaphakeji ngempelasonto yokushushuluza. Ubambiswano lomuntu wesithathu oluvumela abathengisi ukuthi banikeze isivumelwano sephakeji lakha umngcele wokuncintisana onenzuzo enkulu kumthengi kunokuthenga nje into eyodwa.
Okokugcina, abathengisi bangakugwema ukulahlekelwa kwama-showrooming futhi bathuthukise izinzuzo ngokungena ngokwakha inqola ye-omnichannel. Empeleni, inqola ephathekayo nasesitolo inqola eku-inthanethi kufanele ibe yinye. Ukuhamba phakathi kwe-inthanethi nokungaxhunyiwe ku-inthanethi kufanele kube yisipiliyoni esingenamthungo futhi amakhasimende kufanele abe nezinketho ezandleni zabo. Kulezi zinsuku iBOPIS (Thenga Ukuthwebula Ku-inthanethi Esitolo) konke ukufutheka. Kepha ulwazi luphuka kanye esitolo, ngoba umthengi angathola izinto ezingeziwe abafuna ukuzithenga, kepha manje badinga ukuma kulayini kabili ukuthola lezo zinto. Ngokufanelekile, kufanele bakwazi ukungena ku-Webroom bebheke eBOPIS, bese beza esitolo bathole izinto ezingeziwe abazifunayo, bazengeze enqoleni yabo ephathekayo enikwa amandla yi-App yomthengisi, bese beqedela ukuphuma kwe-BOPIS ne-In Gcina izinto ngokuchofoza okukodwa, esiteshini sokuphuma esinobunye.
Ekugcineni, Okuhlangenwe nakho Kwekhasimende Kubaluleke Kakhulu
Isitolo esingokoqobo sesiba yinto yaso uqobo — bheka nje ukuthi bangaki abathengisi bokuqala abaku-inthanethi abavula izindawo zezitini nodaka. Abathengi bafuna ukuzwa ukuthintwa, ukuthintwa, ukubukeka, nephunga lemikhiqizo futhi bangakhathazeki ngempela ngesiteshi. Ukuncintisana nabadlali be-inthanethi ngentengo umjaho oya ezansi. Ukugcina ibhizinisi labo, abathengisi kudingeka banikeze okuhlangenwe nakho okuphoqayo okusesitolo naku-inthanethi okunikeza inani elanele nokusebenziseka kalula amakhasimende angayi kwenye indawo.
Tags: amanani entengo yohlelo lokusebenzaAmanani asuselwa kuhlelo lokusebenzaimvumeukugoqaisipiliyoni samakhasimendeumdlalo wezitoloindlelaIntengo yangaphakathi nohleloukulahlekainqola yesiteshi omnizamananiIntengo yomkhiqizoisipiliyoni sokuthengisaukubukisaukulahlekelwa kokubukisa
U-Amitaabh Malhotra uyisikhulu sezokukhangisa se Noma kunjalo, ipulatifomu edidiyelwe yokukhokha, imivuzo yokwethembeka nokunikezwa okukhuthaza abathengi ukuthi basebenzise umakhalekhukhwini wabo kuzo zonke izici zohambo lokuthenga.